साँबा थर कसरी रहन गयो? - RatoKalam.com is No one news portal.
साँबा थर कसरी रहन गयो?
लिम्बू जातिको थर बोल्दा वा लेख्दा असाध्यै अशुद्ध तरिकाले प्रयोग हुने गर्दछ । त्यस्ता थरमध्ये यो साँबा थर अग्रपङ्तिमा पर्दछ । यो थर बोलाउँदा वा लेख्दा गैरलिम्बू मात्र हैन लिम्बूले पनि उत्तिकै अशुद्ध तरिकाले बोल्छन् र लेख्छन् । हाल मैले एक वंशावली पढ्दै जाँदा यो साँबा थरको नामाकरण भैंसी चढेकाले रहन गएको भनेर मनोगत विश्लेषण गरेको पाएँ । यो साँबालाई भाषागत त्रुटीपूर्ण उच्चारण भएर साँवा अर्थात् भैंसी बुझेर गरिएको विश्लेषण हो । केवल शब्दको ध्वनिलाई मात्र आधार मान्दा सत्यनिकट पुग्न सकिन्न । वास्तवमा साँबा थर कसरी रहेको हो भनेर बुझ्नलाई साँबाहरुको वंशावली र किरात इतिहासको गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्दछ ।
यससम्बन्धी मेरो अध्ययनको आलेख निकै लामो छ । वंशावली लेख्ने क्रममा तयार पारिएको आलेख पुस्तकमा राख्नलाई तयार पार्दैछु । अहिले म सम्बन्धित लेखक र पाठकलाई ध्यानाकर्षण गर्नलाई केवल सार मात्र जानकारीको लागि राख्दैछु । हालसम्मको अध्ययनको आधारमा साँबा थरका १२ भन्दा बढी उपथरका लिम्बूहरु तीन किसीमले साँबा भएका छन् । पहिलो किसिम, साम्बा अर्थात् नेता, जान्नेबुझ्ने, उपचारक आदि गुणबाट कुनै पुर्खाले पाएको उपाधिलाई उसका सन्ततीले थरको रुपमा दिएको निरन्तरता । दोस्रो किसिम, राजालाई अगुवाई गर्ने अर्थात् राजालाई पु¥याउने जसलाई लिम्बू भाषामा हाङ–सा–बा, हाङ साबा हुँदै साँबा भएका (मुदेन्छङ साँबा) । तेस्रो, तुङदुङे मुन्धुम अनुसारअघि साँबा अर्थात् साँबाहाङले शासन गरेका क्षेत्रमा आफ्ना वंश खोज्दै पछि बस्न आएका लिम्बू पनि साँबा भएका छन् (चङबाङ/ लुङहिम्बा/ फेन्छङवा/ फयङ/ काइदाङबा/ मिक्केन्दाङ/ मादेन साँबा) । साँबा थरका विभिन्न उपथरहरुमा कोही ल्हासाबाट आएका मुनाफेन ल्हासाथाङबा, ल्हासामार्गी वा ल्हासावंशी छन् । कोही गंगामैदान, सिम्रौनगढ, चौदण्डी, बराहक्षेत्र, साँगुरी हुँदै साँबा पुगेका काशीथाङबा काशीमार्गी काशीवंशी वा सेनवंशी छन् । यसबारे विस्तृत आलेख पछि प्रकाशित हुनेछ ।
लिम्बूको एक थरीको वंशावलीले लिम्बूकै अर्को थरीको नामाकरण जस्तो संवेदनशील विषयमा बिना अध्ययन, बिना स्रोत मनोगत ढंगले टिप्पणी पुस्तकमा लेखिएकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु । साथै, यसमा म सम्बन्धित लेखकको ध्यानाकर्षण गराउँछु । पाठकवर्गमा मैले माथि प्रस्तुत गरेका तीन तरिकाबाट साँबा बनेका आधारका स्रोत तुङदुङे मुन्धुम, वंशावली र किरात इतिहास भएको जानकारी समेत गराउँछु । कृपया साँबा (Samba) लाई साँवा (Sanwa/Sawa) उच्चारण नगरिदिन हुन पनि आग्रह गर्दछु । धन्यवाद ।